चुनावी तालमेलमा गठबन्धनको झमेलाः मधेशमा पत्रकारको प्रतिकृया | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » चुनावी तालमेलमा गठबन्धनको झमेलाः मधेशमा पत्रकारको प्रतिकृया
चुनावी तालमेलमा गठबन्धनको झमेलाः मधेशमा पत्रकारको प्रतिकृया
अहिले तीनवटा गठबन्धनको चर्चा छ । एउटा वाम गठबन्धन, अर्को लोकतान्त्रिक गठबन्धन र तेस्रो मधेशी गठबन्धन । त्यसमध्ये वामगठबन्धन प्रकृयामा पनि गइसकेको छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन र मधेशी गठबन्धनले पूर्णता लिन बाँकी छ । अर्थात गठबन्धन बनाउने वा चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको छ यी दुई गठबन्धनमा । मधेशवादी दलका भनाई सुन्दा उहाँहरुले काँग्रेससँग गठबन्धन होइन, चुनावी तालमेल मात्र गर्न चाहनु भएको छ । तर, काँग्रेसले चुनावी तालमेल भन्दा गठबन्धन नै बनोस् भनि चाहेको छ । फोरम नेपाल र राजपा नेपालबीच पनि गठबन्धन वा चुनावी तालमेलको कुरा अगाडि बढेको छ तर नेताहरुसँग यसो बुझ्न खोज्दा त्यहाँ पनि गठबन्धन भन्दा पनि चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिएको छ । गठबन्धनले तराई मधेशमा कस्तो असरपार्न सक्छ, यसको कस्तो प्रभाव छ लगायतका विषयमा मधेशको विषयमा निरन्तर कलम चलाउने पत्रकारहरुसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश जस्ताको त्यस्तैः
समानुपातिकले तालमेलमा असर
तालमेलप्रति पहिला जनता जति सकारात्मक थिए अहिले त्यति सकारात्मक देखिएको छैन । त्यसको कारण हो, समानुपातिक सीटको बाँडफाँड । मधेशवादी दलका नेताहरु आफू कसरी मन्त्री बन्ने आफ्नो सीट कसरी सुरक्षित गर्ने आफ्ना आफन्तका सीट कसरी सुरक्षित गर्ने त्यसैमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । मधेशी जनताहरु प्रदेशको मुख्यमन्त्री कसरी बन्ने त्यसकै तालमेलमा लागेको देखिन्छ तर जो मधेशका लागि रगत बगाए, मधेशका लागि ज्यानको बाजी लगाए । मधेशको अधिकारका लागि दिनरात लडे त्यसको लागि कुनै ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ । सीट मात्र कसरी बढी ल्याउने, आफू मात्र कसरी जित्ने त्यसको लागि मात्र गम्भीर भएको देखिन्छ तर समावेशी समानुपातिक, समग्र मधेशको कसरी प्रतिनिधित्व गराउने त्यसको बारेमा गौण देखिएको कारणले तालमेलप्रति त्यति सकारात्मक देखिएको छैन । यद्यपी यो तालमेलले मधेशको लागि फाइदा हुने देखिन्छ । तालमेलले मधेशमा अधिकाँश सीट जित्ने अवस्था प्रष्ट देखिन्छ । काँग्रेस, राजपा नेपाल, फोरम नेपालबीच तालमेल भयो भन्ने झन राम्रो अवस्था हुने देखिएको छ । यी तीन दलको बीचमा तालमेल भयो भने मधेशमा अरु दलले त्यति सीट ल्याउन सक्दैन । काँग्रेसबाहेक पनि यी दुई दलमा तालमेल भयो भनेपनि मधेशमा राम्रै सीट ल्याउने देखिन्छ । र, यो हुनुपनि पर्छ ।
धिरेन्द्रप्रसाद साह, सप्तरी
तालमेल मधेशका लागि सकारात्मक
मधेशी जनताले चाहेको जस्तो चाहना पूरा भएको छ । मधेशवादी दल तालमेल गरेर चुनाव लडोस् भनि चाहना धेरै पहिला देखिको थियो । पछिल्लो समय विभिन्न छवटा मधेशी दल मिलेर राजपा नेपाल बनेको छ । यसले मधेशमा ठूलो सन्देश दिएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले काँग्रेससँग एकीकरण नै गरिसक्यो । बाँकी रह्यो फोरम नेपाल र राजपा नेपाल । यी दुई दलको बीचमा तालमेल हुँदा धेरै नै राम्रो हुन्छ । फोरम नेपाल र राजपा नेपालबीच तालमेल गर्दा मधेशमा बहुमत हुने निश्चित नै छ । दुई दलको बीचमा तालमेल भयो भने तराई मधेशको अधिकाँश सीट जित्न सक्छ । राजमार्गभन्दा तलको अधिकाँश सीट जित्ने सुनिश्चित छ किनभने मधेशवादी दलको संगठन राजमार्गभन्दा तल रहेको छ । यदि तल यी दुई दलको बीचमा तालमेल भयो भने मधेशमा बहुमतमा रहनेछ र केन्द्रमा पनि सुरक्षित स्थान रहनेछ तर यी दुई दलका नेताहरुको क्रियाकलाप र व्यवहार हेर्दा तालमेल स्वस्थ्य ढंगले हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हालै आयोगमा असोज २९ गते बुझाएको समानुपातिको बन्द सूचिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही नेताहरु विरोध शुरु गरेका छन् । यसले तालमेलमा केही असर गर्छ कि जस्तो लाग्छ ।
शैलेन्द्र साह, धनुषा
उज्यालो नेटवर्क एफएम
काँग्रेसले तालमेल स्वीकार नगर्न पनि सक्छ
खासगरि महोत्तरी जिल्लामा राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच मात्र तालमेल भयो भने राम्रो हुन्छ । किनभने स्थानीय तहको चुनावमा त्यो कुरा देखाइ दिएको छ । महोत्तरीमा फोरम नेपाल कमजोर भएपनि राजपा नेपालभन्दा फोरम नेपालको संगठन राम्रो देखिन्छ । चुनावमा जितहार आफ्नै ठाउँमा हुन्छ । तर संगठनको हिसाब हेर्ने हो भने फोरम नेपालको राम्रो छ त्यही भएर यी दुई दलले तालमेल गरेर चुनावमा गयो भने चारवटै निर्वाचन क्षेत्र जित्ने सम्भावना हुनसक्छ । चारवटै क्षेत्र जित्न सकेन भने दुईटा त अवश्य नै जित्छन् । केन्द्रमा राजपा नेपाल, फोरम नेपाल र काँग्रेसबीच पनि तालमेल हुने कुरा भइरहेको छ । तर यहाँ स्थानीय लेभलमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको छैन । यदि केन्द्रबाट तालमेल गरायो भने यहाँ स्थानीय स्तरमा काँग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । किनभने काँग्रेसले चारवटै क्षेत्रमा आफ्नो राम्रो रहेको र जित्नसकिने दावी गरिरहेका छन् त्यही भएर सायद काँग्रेसले तालमेल नगर्न पनि सक्छ जस्तो यहाँ देखिएको छ । अर्को कुरा मधेशवादी दलले पठाएको समानुपातिकको सूचिप्रति यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताहरु निकै रुष्ट भएको देखिन्छ । आन्दोलन गर्ने हामी समानुपातिक लिने अरु कोही यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै यहाँका नेताहरु विरोध जनाइरहेका छन् ।
कमलेश मण्डल, महोत्तरी
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखा
काँग्रेससँग तालमेल रुचाउँदैनन् मधेशी जनता
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर चारबाट चुनाव लड्ने चर्चा छ । त्यहाँबाट काँग्रेसका अमरेशकुमार सिंहलाई टिकट नदिने पनि चर्चा भइरहेको बेला राजपा नेपालका राजेन्द्र महतो जित्ने पक्का छ । माओवादी केन्द्रबाट शिवपुजन राय यादवले चुनाव लड्ने पनि चर्चा छ । उहाँ माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने भएपनि राजेन्द्र महतो भाडी हुने देखिएको छ किनभने राजेन्द्र महतो लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट चुनाव लड्नु हुन्छ । राजपा नेपाल, फोरम नेपाल र काँग्रेसबीच तालमेलमा राजेन्द्र महतो चुनाव लडेपछि स्वभाविक रुपमा बलियो हुन्छ । अर्को कुरा त्यहाँ कोइरी (महतो) को सँख्या बढी नै छ त्यो सबै मत राजेन्द्र महतोलाई नै जान्छ । शिवपुजन राय यादवलाई जाने यादवको मत बाँडिने भएको छ । तालमेल भयो भने फोरम नेपाललाई पर्ने यादव समुदायको मत पनि राजेन्द्र महतोलाई नै जान्छ । सर्लाहीमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वामगठबन्धनको लडाई हुने देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि काँग्रेस देशभरि नै कमजोर भएको छ । काँग्रेसको मत भनेको मधेशमै हो यहाँ पनि राजपा नेपाल र फोरम नेपाल मिलेपछि काँग्रेस झन कमजोर भएको छ । त्यसैले काँग्रेसको बाध्यता छ राजपा नेपाल फोरम नेपालसँग मिल्न । तर, यहाँका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु काँग्रेससँग तालमेल रुचाएको छैन । काँग्रेसले पटक पटक धोका दिएर मधेशको अवस्था यो ठाउँमा पुगेको छ । अब पनि काँग्रेससँग तालमेल गर्नु भनेको मधेशमा स्पेश दिनु जस्तै हो भनि मधेशी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भनिरहेका छन् ।
मनोज यादव, सर्लाही
पत्रकार, स्वर्णिम एफ.एम.
लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीच टक्कर
रौतहटमाा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन बीच टक्कर हुने देखिएको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दा वाम गठबन्धन बलियो देखिएको छ । अहिलेसम्म त राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच नै तालमेल हुने देखिएको छ । मधेशवादी दलको काँग्रेससँग हुने तालमेलको चर्चा मात्र चलिरहेको छ । यदि काँग्रेससँग भयो भने मधेशवादी दलको बीचमा टिकटका लागि अप्ठ्यारो हुने देखिएको छ । वाम गठबन्धनमा क्षेत्र नम्बर चारमा एमालेका रामकुमार भट्टराई, दुईमा माओवादीका सत्यनारायण भगत, तीनमा माओवादीका प्रभु साहको चर्चा रहेको छ, एक नम्बरमा एमालेले नै टिकट पाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ । रौतहटमा फोरम नेपालको वजनदार नेता रहेका छैनन् । बबन सिंहहरुको नाम मात्र चर्चामा छ तर भोटको हिसाबले त्यति भरपर्दो देखिएको छैन । एक नम्बरमा काँग्रेसका कृष्णा यादव बलियो देखिन्छ जहाँ राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाको नाम पनि चर्चामा रहेको छ । कृष्णा यादव पनि टिकटका दावेदार हुनुहुन्छ, यदि मधेशवादी दल र काँग्रसको बीचमा तालमेल भयो भने त्यहाँ यी दुईजनाको बीचमा टिकटका लागि झमेला हुनसक्ने सम्भावना छ । कृष्णा यादवले पनि यसपाली मान्ने पक्षमा देखिएको छैन । तीन नम्बरबाट राजपा नेपालका गोविन्द चौधरीको नाम पनि चर्चा छ, त्यहाँ फोरम नेपालका किशोरी यादव पनि टीकटको दावी गरिरहनु भएको छ । यदि उहाँले प्रतिनिधिसभामा टिकट पाउनु भएन भने प्रदेशमा पनि चित्त बुझाउनु हुन्छ । त्यहाँ काँग्रेसका जितेन्द्र यादव पनि टिकटको दावी गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ निवर्तमान सांसद पनि हुनुहुन्छ । तीन नम्बर क्षेत्रमा गोविन्द चौधरी र प्रभु साहको बीचमा टक्कर हुने अवस्था छ । तीन नम्बरमा यी दुई नेता आफैमा बलियो हुनुहुन्छ । थारु समुदायको भोट करिब १२ हजार रहेका छन् भने साहुको भोट करिब आठ हजार रहेका छन् । जातीको नारा लाग्यो, जातियता भोटको कुरा भयो भने गोविन्द चौधरी जित्ने सम्भावना हुनसक्छ नभए प्रभु साह नै बलियो देखिन्छ । गठबन्धन भएको कारणले नेताहरुको बीचमा जवर्जस्त टक्कर हुनेबाला छ । राजपा नेपालका प्रदिप शम्शेरको चर्चा पनि क्षेत्र नम्बर चारमा रहेको छ । समग्रमा गठबन्धनको शुरुवात राम्रो हो, यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यो गठबन्धन तत्कालका लागि चुनावी तालमेलमा सफल भयो भने नेपाली पोल्टिक्समा नयाँ शुरुवात हुनेछ ।
प्रेमचन्द्र झा, रौतहट
पत्रकार, क्रान्तिद्धार दैनिक
भने जस्तो सजिलो छैन, चुनावी तालमेल
राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच हुन गइरहेको तालमेलका कारण नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्साहित भएका छन् । यी दुई दल स्थानीय तहको चुनावमा छुट्टा छुट्टै चुनाव ल्याउँदा पनि जुन पोजिसन ल्याए त्यो धेरै नै राम्रो हो । त्यस अवस्थामा यदि यी दुई दल मिलेर चुनाव लड्यो भने स्वभाविक रुपमा बढी सीट ल्याउँछन् नै । त्यसमा पनि काँग्रेससँग पनि तालमेल गर्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसले त झनै राम्रो बनाउँछ । तर, काँग्रेससँग तालमेल गर्ने पक्षमा मधेशवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु देखिएका छैनन् । उनीहरुको चाहना भनेको राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच मात्रै होस् भन्ने नै हो । किनभने राजपा नेपाल र फोरम नेपाल मात्र एक भएपछि त्यति बराबरको सीट ल्याउन सक्छ जति सीट काँग्रेससँग तालमेल गरेर पनि मात्र ल्याउँछन् भने काँग्रेससँग तालमेल गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन भनि भनाईहरु आइरहेका छन् । काँग्रेसले मधेशबाट भोट लिएपनि उसले मधेशीलाई भोट दिएको छैन । त्यसको उदाहरणमा झापा, मोरगं र सुनसरीलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ एउटा पनि काँग्रेसले मधेशीलाई भोट दिएन, अर्थात मधेशी दलबाट कसैलाई जिताएन । तर, आज मधेशमा तालमेलको बहानामा मधेशीको मत लिन काँग्रेस रणनीति बनाइरहेको छ । अर्कोतिर वाम गठबन्धन पनि कमजोर छैन । यदि एमालेप्रतिको आक्रोश कायम नै रह्यो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पनि त्यसको असर देखाउन सक्छ । यदि त्यस्तो भएन भने राजमार्गमा मात्र होइन हुलाकी राजमार्गसम्म वाम गठबन्धनले आफ्नो असर देखाउन सक्छ । दुई नम्बर प्रदेशको मात्र कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी मत एमालेले नै ल्याएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा धेरै फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ, त्यसले हारजितको कुरा हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव अलि फरक कुरा हो । यसमा धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वामगठबन्धनलाई पुरै इगनोर गरेर जाने अवस्था छैन । तर गठबन्धन हुँदैमा सबै जादुको छडी जस्तै हुन्छ भन्ने पनि होइन । केन्द्रमा मिलेको जस्तो स्थानीय स्तरमा मिलाउन सजिलो छैन । भर्खर भर्खर स्थानीय चुनाव सकिएको छ । खुशीयाली मनाउने क्रम सकिएको छैन, दुख मनाउने क्रम रोकिएको छैन । यस अवस्थामा तालमेल गर्न भनिरहेको छ त्यो कति सम्भव छ, सोचनीय विषय हो । जहाँ राजपा नेपालले फोरम नेपाललाई हराएर एमालेलाई जिताएको छ भने त्यहाँ राजपा नेपाल र फोरम नेपाल कुनै पनि हालतमा मिल्नसक्छ त ? जहाँ माओवादी केन्द्रले अरु दलसँग मिलेर एमालेलाई हराएको छ त्यहाँ जति वाम गठबन्धनको कुरा गरेपनि भित्रैदेखि मिल्ने कुरा हुन्छ त ? हुँदैन । यदि हुन्छ भने त्यो देखावटी मात्र हुन्छ भित्रभित्रै हराउने खेल पनि हुनसक्छ । त्यसैले भन्ने जस्तो सजिलो छैन चुनावी तालमेल ।
मिथलेश यादव, सिरहा
पत्रकार, नागरिक दैनिक
झुकाव मधेशी गठबन्धनतिर नै हो
चुनावी तालमेल र गठबन्धन नितान्त फरक कुरा हो । गठबन्धन विचार, सिद्धान्त र मुद्दा मिल्नेसँग मात्र हुनसक्छ भने तालमेल जुनसुकै दल वा व्यक्तिसँग हुनसक्छ । सीट जित्ने ठाउँहरुमा तालमेल गरेर जित्नु नै चुनावी तालमेल हो । यसमा यो कुन पार्टीको हो, कुन दलको हो हेरिदैन । जसका पछिल्लो उदाहरण राप्रपा र एमालेबीचको चुनावी तालमेललाई लिनसकिन्छ । यी दुई दलबीचको विचार, सिद्धान्त र मुद्दामा आकाश जमिनको फरक छ तर चुनावी तालमेलमा यी कुरालाई देखिदैन तर गठबन्धन बनाउँदा सायद यी सबै कुरालाई विचार गरेको हुन्छ । चुनावी तालमेल चुनाव जित्नका लािग हुने हो । जित्नकै लागि फरक विचार बोकेका, फरक नीति भएका दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्छन् । राजनीतिकमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन । जेपनि सम्भव हुन्छ । भनिन्छ नि, राजनीतिक सम्भावनको खेल हो । काँग्रेससँग मधेशी दलको तालमेल सम्भव देखिदैन, किनभने राजपा र फोरमका कार्यकर्तालाई थाह छ कि काँग्रेससँग तालमेल गरेपनि त्यति सीट आउँदैन जति सीट फोरम र राजपाबीचको तालमेलले आउँछ । मधेशी दलको बार्गेनिङ्ग र काँग्रेसमा यस विषयमा व्यापक छलफल नहुनुले तालमेल सम्भव नदेखिएको हो । अर्को कुरा, यो वाम तालमेलले मधेशमा केही मात्रामा प्रभाव परेको देखिएको छ । यद्यपी झुकाव भने मधेशी गठबन्धनतिर नै हो । वाम गठबन्धनले कम्युनिष्टहरु केन्द्रमा जति उत्साहित देखिन्छ, त्यति उत्साहित मधेशमा देखिएको छैन । यदि एमाले र माओवादीले चुनावसम्म वाम गठबन्धनलाई प्रचार गर्न सक्यो भने चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सक्छ । वाम गठबन्धन बन्दा केही ठाउँमा कार्यकर्ताहरु असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् । दुईटै गठबन्धनमा । तर यो अस्वभाविक पनि होइन ।
विनय कुमार, काठमाडौ
पत्रकार, सगरमाथि टीभी
सहारा टाइम्स पत्रिकारको कात्तिक १ गतेको अंकबाट